News - Uru nke igwe anaghị agba nchara anwụrụ ịgbado ọkụ igwe
SHANGHAI COREWIRE ụlọ ọrụ CO., LTD
Roll akpụ Machinery
CZ Purlin akpụ Machine
Corrugated Roll akpụ Machine
High Speed ​​Roofing Wall Pannel Roll akpụ Machine
Ngidi Roll akpụ Machine
Metal oche Roll akpụ Machine
Eguzo onuete Roll akpụ Machine
Highway Guardrail Roll akpụ Machine
Waya & USB Machinery
Nnennen Waya ịbịaru Machine
Electrode Mkpanaka Production Line
Akpaghị aka Chain Link ngere Machine
High Speed ​​Barbed Waya igwe
High Speed ​​Ntu Ime Machine
Akụ mapụtara & Consumables
Uru nke igwe anaghị agba nchara Pipe ịgbado ọkụ igwe
Igwe anaghị agba nchara anwụrụ Ndinam igwe na-bụ-eji maka na-aga n'ihu akpụ usoro nke igwe anaghị agba nchara na carbon ígwè profaịlụ, dị ka gburugburu, square, profiled, na mejupụtara ọkpọkọ, nke na-emepụta site uncoiling, akpụ, argon aak ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ onuete egweri, ịgbatị , igbutu, na usoro ndi ozo.
Pipe ịgbado ọkụ akụrụngwa - Igwe anaghị agba nchara anwụrụ ịgbado ọkụ igwe bụ isi akụrụngwa na ọkpọkọ ịgbado ọkụ mmepụta akara, ya oke mgbe niile bụ nchegbu nke investors. Kedu otu esi ahọrọ igwe anaghị agba nchara igwe anaghị agba nchara? Soro uru ịchọta, ọ ga-abụ ihe ziri ezi.
1. Akpaghị aka mmepụta: na oge nke oge ụkọ mmadụ, igwe anaghị agba nchara anwụrụ ịgbado ọkụ igwe akpaghị aka mmepụta, maka ndị nrụpụta iji chekwaa nnukwu akụkụ nke ụgwọ ọrụ, na-ewepụ akụkụ nke nrụgide na ọzụzụ talent.
2. Kwụsie ike: ka mma kwụsie ike nke igwe anaghị agba nchara anwụrụ ịgbado ọkụ igwe, ihe siri ike na inogide. Ihe a kpebiri site na ihe, yana ihe dị mma iji mepụta akụrụngwa adịghị mma. Igwe anaghị agba nchara anwụrụ ịgbado ọkụ igwe rube isi na àgwà nke ihe, na-eme àgwà ngwaahịa, maka ndị ahịa dị ka ọrụ nke ha, mbụ ahịa, ike a mmeri-mmeri ọnọdụ.
3. High arụmọrụ: elu arụmọrụ bụ otu n'ime mmepụta uru nke igwe anaghị agba nchara anwụrụ ịgbado ọkụ igwe. Ma echiche nke a uru bụ na àgwà nke igwe na ebu na-ekwe nkwa, belata ọnọdụ nke mmezi na ndozi, na mgbe ahụ na mmepụta arụmọrụ ga-ndammana mma.
Ogo dị mkpa maka akụrụngwa; ọ na-ekpebi ngwaahịa okokụre. Àgwà nke igwe anaghị agba nchara anwụrụ Ndinam igwe metụtara mmepụta akara na mmepụta akara, họrọ nke ọma! Ọrụ zuru oke nwere ike inyere gị aka idozi ọtụtụ nsogbu nrụpụta ma mee ka itinye ego n'okporo ụzọ na-aga were were. Dịka ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ, gwa anyị nsogbu gị, ka anyị dozie nsogbu ndị ahụ ma nye gị ọrụ na-eju afọ.
Post oge: Dec-16-2020
Alọ A309, No.7178, Zhong Chun Road, Min Hang District, Shanghai, China
Usoro Flow nke High Frequency welded Pip ...
The Market Prospect nke welded Pipe Equipm ...
Uru nke igwe anaghị agba nchara Pipe Weldin ...
Mmezi nke igwe anaghị agba nchara Pipe Makin ...